तत्काल नेतृत्व नछाड्ने काँग्रेस सभापति देउवाको अडान – Shuva News
तत्काल नेतृत्व नछाड्ने काँग्रेस सभापति देउवाको अडान
Shuvanews १७ कार्तिक २०७५, शनिबार 303 Views
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एक ढिक्का नबनाएसम्म नेतृत्व नछाड्ने बताउनुभएको छ । उहाँले काँग्रेसलाई एकढिक्का बनाईसकेपछि मात्रै आफुले राजनीतिबाट विश्राम लिने बताउनुभयो । संविधान घोषणापछि सम्पन्न तीन तहको निर्वाचनबाट कांग्रेस पार्टी पराजित भएपनि सिद्धान्त विजय भएको उहाँको भनाई थियो ।
दसैं, तिहार, छठ तथा नेपाल संवत्को उपलक्ष्यमा कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका–४ कार्यसमितिले शनिबार आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले तीन तहको निर्वाचनपछि कांग्रेसले अपेक्षित मत परिणाम ल्याउन नसके पनि अर्को निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो नम्बर बनाउनका लागि आफू निरन्तर लागि रहने र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाइसकेपछि मात्र विश्राम लिने बताउनुभएको हो ।
सभापति देउवाले मुलुक अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको चर्चा गर्दै मुलुकमा बलात्कार तथा हिंसाजन्य अपराध धेरै बढेको र सरकारले पीडितलाई न्याय दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले कांग्रेस एक ढिक्का भई निर्वाचनमा गएमा अर्को पटक कांग्रेसले निर्वाचन जित्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
गते निर्वाचनमा पार्टीभित्रको गुट उपगुटका कारण पार्टीले पराजय भोग्नुपरेको महामन्त्री कोईरालाको भनाई थियो । पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा शान्ति स्थापना भएको, संविधान जारी भएको तथा तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भएको बताउनुभयो । अर्का पूर्वमन्त्री नरहरि आचार्यले लोकतन्त्रमा सत्तापक्षको साथै प्रतिपक्षको पनि उत्तिकै भूमिका रहने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।